आशुतोष तिवारी - कान्तिपुर समाचार
बजेट भाषणले देखाएको छ— दस महिनामा पनि विकास बजेटको ५० प्रतिशत खर्च भएन । अघिल्ला वर्षहरूमा पनि अवस्था फरक थिएन । जनताको करबाट जम्मा पारेको पैसा जत्ति छुट्याए पनि गर्ने भनेको कामै नहुने ! कामै नभएपछि छुट्याइएको खर्च पनि प्रयोग नहुने ।
नेपाली गणतान्त्रिक लोकतन्त्र अपूरो छ । नेपाली जनतासँग खासै गाँसिएको देखिँंदैन । देशका बिभिन्न भाग घुमेर जनतासँग सोध्दा धेरैले ‘नेताहरूलाई मात्र ठिक भएको यो गणतान्त्रिक लोकतन्त्र माथिबाट थोपरिएको व्यवस्था हो’ जस्तो कुरा गर्छन् । पहिलेकै व्यवस्था ठिक थियो भनेर धेरैले ठाडै भन्दैनन् । तैपनि अहिलेको व्यवस्था पहिलेभन्दा धेरै राम्रो छ भन्नेहरू घट्दैछन् । तितो यथार्थ यही हो ।
आशुतोष तिवारीका लेखहरु :
नेपालमा हामी अर्थतन्त्रलाई सामान्यतया एउटै ढिक्कामा राखेर हेर्छौं । चलायमान विविधताले भरिएको हाम्रो अर्थतन्त्रका हाँगाबिंँगा हुन्— कृषि, व्यापारिक सेवा दिनुलिनु, सामान बनाउनु र बेच्नु, रेमिटान्स भित्र्याउनु, आयात–निर्यात गर्नु अनि वित्तीय सेवा दिनु । अब डिजिटल प्रोडक्ट र डिजिटल सर्भिसहरू कान्छो हाँगाका रूपमा हाम्रो अर्थतन्त्रमा आएका छन् ।
अर्को साता नेपालमा लगानी सम्मेलन हुँदै छ । देश–विदेशका लगानीकर्ताहरू नेपाल आउँदै छन् । तर ‘लगानी सम्मेलन जति वटा गरे पनि खासै फरक पर्दैन’ भन्नेहरू पनि कम छैनन् । आलोचनाको यो पृष्ठभूमिमा यो सम्मेलनलाई उपलब्धिमूलक बनाउन नेपालले के–के कुरामा ध्यान दिनुपर्ला ?
समृद्धि बहसमा छुटाउन नहुने पाटो उद्यमशील समाज हो । हामीकहाँ उद्यमशील समाज बन्न र बनाउन गाह्रो छ । कठिन भएपछि उद्यम कुरामै सीमित हुन्छ, काममा हुँदैन । भइहाले अनौपचारिक तवरले हुन्छ, जसको लेखाजोखा औपचारिक अर्थतन्त्रमा हुँदैन ।
डेढ महिनाअघि दाङको राम्रीस्थित भीरबाट ७ सय मिटर तल बस खस्दा २३ यात्रुको ज्यान गयो । मृत्यु हुनेमा धेरै वनविज्ञान अध्ययनरत विद्यार्थी र शिक्षक थिए । धेरैजसो आधा जिन्दगी पनि नकाटेका थिए । उनीहरूमा भविष्यमा ‘यो गरौंला/त्यो गरौंला’ भन्ने विभिन्न आकांक्षा थिए होलान् ।